Ogaden News Agency (ONA) – War-saxaafadeed ay Jabhadda ARDUF ee ka dagaalanta gobolka Cafarta soo saareen
War-saxaafadeed ay Jabhadda ARDUF ee ka dagaalanta gobolka Cafarta soo saareen
Jabhada shacabka Cafarta oo lagu magacaabo Afar Revolutionary Democratic Unity Front (ARDUF)’s ayaa war-saxaafadeed ay soo saartey ku sheegtay in ciidan si gaar ah u tababar oo ka hawlgala gobolada Cafar ee Zone-ka 4aad iyo 2aad ee dawlad goboleedka Cafarta ay weerar mir ah ku qaadeen xiro uu ciidanka Wayaanaha ee TPLF-tu ku lahaayeen halkaa. Weerarka y ku sheegeen inuu ahaa mid si fiican loo qorsheeyey ayay ku sheegeen in waqti habeenima ah iyadoo ay ciidanka cadawga hurdaan xero ku taala degmada Teeru ay u xaluusheen ka dibna ay kaga dileen ciidan cadawga 49 meesha ay kaga dhaawaceen siday ay sheegeen dhowr iyo labaatan. Waxay kaloo sheegeen in mid ka mid ah daba-qoodhiga Cafarta halkaa lagu dilay.Wuxuu kaloo sheegey ururuka ARDUF inay ka furteen cadawga hub iyo saanad farabadan taasoo u suutagalin doonta inay sii wadaan weerada ay ku hayaan wayaanaha.
Sidii dhaqanka u ahayd gumaysiga Itobiya waxay ku sheegeen warsaxaafadeedka jabhadda ARDUF inuu cadawga dadkii shacabka ahaa ee ka agdhawaa xerada la weeraray ka aargoosteen iyagoo qab-qabtey dad shacab ah oy ku eedeeyeen inay yihiin taageerayaasha ururka oo aan la garanaynin meel ay ula keceen. Waxay ku toogtay isla goobtii todoba ka mid ah dadweynihii ay qabteen, waxayna dabka qabadsiiyeen sida ay sheegeen ARDUF guryihii dadka shacabka ah.
Waxay ballan ku qaadeen jabhadda ARDUF (UGUUGUMO) war-saxaafadeedkooda inay sii wadi doonaan halgankooda inta xuquuqda aaya-ka-tashiga shacabka Cafarta laga xaqiijinayo.
Dhamaan qawmiyadaha ku hoos jira gumaysiga Itobiya iyo shucuubta Itobiya ee ku hoos nool cadaadiska iyo cabudhinta nidaamka Wayaanaha ayaa isu diyaariyay inay dagaal hubaysan ku qaadaan jabhadda TPLF-ta oo si waadix ah ugu cadeysay in aanay xukunka kaga tagynin wax aan hayn xabadii ay ku qabsadeen. Dhaq-dhaqaaqan xoogan ee ka socda qabtolka Itobiya ayaa keenay inuu KT Meles Zinawi ku hanjabo inuu dagaal ku qaadi doono dalka Eretreeya taasoo ay mucaaradka Itobiya ku macneeyeen inuu liito nidaamkiisa.